» “सत्तागठबन्धन भ’त्किँदै , उपेन्द्रले त आज’ मुखै खोले’ ! “सत्तागठबन्धन भ’त्किँदै , उपेन्द्रले त आज’ मुखै खोले’ ! – हाम्रो खबर
“सत्तागठबन्धन भ’त्किँदै , उपेन्द्रले त आज’ मुखै खोले’ !
हाम्रो खबर संबाद दाता 176 Views
“काग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपा विचको सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ ।”
“गठबन्धनमा समस्या आएको लामो समय भए पनि आज सम्म नेताहरुले गुपचुप राखेका थिए, अब भने सार्वजनिक रुपमै बोल्न थालेका छन् । भित्र भित्रै गठबन्धन कुन हालतमा पुगेको रहेछ भन्ने आज खुलेको छ ।”
“सत्तागठबन्धको प्रमुख दल मध्येको एक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रुपमै नेपाली काग्रेस सँग सहकार्य गर्न एकदमै गारो भैराखेको बताएका छन् । उनले काग्रेसलाई विकृतीको नाइके समेत भनेका छन् ।”
“शनिबार जसपा निकट गैर भौगलिक विशेष प्रदेश समितिले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा यादवले बहुदल आएपछिको सवै बिकृति फैलाउने दल कांग्रेस भएको आरोप लगाउदै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसंग सहकार्य गर्नु निकै कठिन भएको बताएका हुन् ।”
“कांग्रेससंग बिकृतिबाहेक केहि नभएको उनले बताए । उनले सरकार गठन भएको तीन महिनापछि मात्र आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएकोे भन्दै तीन महिनाभित्र कांग्रेसले थाहा नै नदिइकन आफू निकट व्यक्तिमात्र भर्ती गरेको आरोप लगाए । यादवले आफ्नो पार्टीले जनताको पक्षमा अधिकतम काम गर्ने बताए ।”